September 2018 - MoviesFan
Coldplay အဖွဲ့က အဆိုတော် Chris Martin နဲ့ ချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ Dakota Johnson
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Fifty Shades ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသမီးချော Dakota Johnson ဟာ သူမရဲ့ အချစ်ရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဘေးလူတွေ မသိနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုံးဖိတတ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ပန်းသတင်း လေညင်းဆောင်၊ လူ့သတင်း လူချင်းဆောင် ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပေါ့။ အချစ်ရေးကို Read More
celebrity news, dating news, Hollywood
ကိုရီးယားကားချစ်သူများ စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် Terius Behind Me
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲသစ်လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဗျ။ လတ်တလောကတော့ ပရိသတ်တွေ သိထားတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့ အခုထပ်မံထွက်ရှိလာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကလည်း ကိုရီးယား Crazy တွေကို ဆွဲဆောင်နေဦးမှာ အသေအချာပါပဲဗျာ။ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ နာမည်ကတော့ Terius Behind Me ပါတဲ့ဗျာ။
နာမည်ကျော် ကိုရီးယားရုပ်သံလိုင်း MBC ကနေ Read More
Comedy, Drama, Korea, Series
Trailer ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ အမီးလ်ခန် ရဲ့ Thugs of Hindostan
ပရိသတ်တွေရင်ထဲအထိရောက်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးလေ့ရှိသူ အမီးလ်ခမ်းဟာ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်သစ်တစ်ခုကို ၂၀၁၈ ထဲမှာပဲ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စက်တင်လာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာပဲ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားသစ် Thugs of Hindostan ရဲ့ Tralier ကို မိတ်ဆက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ ဆယ့်ကိုးရာစုမှာ အင်္ဂလိပ်တွေကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ Read More
action, Indian Cinema
လူသတ်သုတ်သင်မှုကြီးရဲ့ နိဒါန်းအစပျိုခြင်းအကြောင်း The First Pruge
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Horror ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဇာတ်ကားတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်လို့ ပေးချင်ပါတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် သရဲကားတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ လူသတ်ကားပေါ့။ ဒါပေမယ့် စိတ္တဇလူသတ်ကားမျိုးမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ လူသတ်ကားပါ။ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထဲမှာ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေ စောင့်မျှော်နေရတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကတော့ အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ The First Purge ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The First Purge ဇာတ်ကားဟာ Read More
Hollywood, Horror, Mystery & Suspense, Thriller
အတွဲလိုက်လူသတ်သမားနဲ့ လူငယ်စုံထောက်တို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ Winter Ridge
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူများအတွက် ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ဗျ။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ဒရာမာဇာတ်ကားမျိုးပါ။ ဒီလထဲမှာ ထွက်ထားတာဖြစ်လို့ ဇာတ်ကားသစ်တစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်ကတော့ Winter Ridge လို့ အမည်ရပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Dom Lenoir ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Winter Ridge ဇာတ်ကားဟာ Read More
အရမ်း hot နေတဲ့ The End of the F**king World
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ rating အရမ်းကောင်းပြီး British series လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The End of the F**king World ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ series ကတော့ iMDb 8.6 နဲ့ Rotten tomatoes 98% ထိရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 2018 British Academy Television Award for Best Drama Series ဆုအတွက် လျာထားခြင်းခံခဲ့ ရပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတော့ Netflix မှာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာ စတင်ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီ series ထဲမှာ Read More
Adventure, Drama, Netflix, Series
သင်သိပါသလား? Train to Busan ရုပ်ရှင်ကို Hollywood Version နဲ့ ပြန်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတာ!
Train to Busan Remake လို့ အမည်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးမယ့်ဒါရိုက်တာက တခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကျော် သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ James Wan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ James Wan ဟာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်များစွာရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်နေပြီး Train to Busan ကအဲ့ဒီထဲက တစ်ကားအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Train to Busan ဟာ Read More